Kedu ihe jikọrọ n'etiti ime SEO na backlinks profaịlụ?
SEO na backlinks a maara dị ka ndị dị oké mkpa na ikekwe akụkụ kachasị ike nke nkwado ngwaahịa ugbu a - niile n'ime otu. Ọ bụ ezie na usoro njikọ njikọta nke zuru ezu n'ozuzu ya na - ejikọta na njikarịcha Search Engine, bụ ebe dị mkpa ugbu a dị oke egwu - na - ebugharị ọganihu ọ bụla nke ogo weebụ ọ bụla, karịsịa site na afọ ndị na - adịbeghị anya. M na-ekwu na atụmatụ ọ bụla na SEO na backlinks nwere ike gbanwere ozugbo - dịka ọfụma ọzọ nke algorithm na-ebute site na Google (cheta ọtụtụ obi nkoropụ sitere n'aka Penguin - möbel günstig einlagern. nri?). Ka o sina dị, e nwere ọtụtụ ọhụụ dị iche iche ma na-ejikwa SEO na backlinks onwe ha iji nọrọ n'akụkụ dị mma ma nwee obi iru ala - ọbụnadị na-agbanwe agbanwe eziokwu na-achịkwa mpaghara sara mbara na nke zuru oke nke SEO.
M na-ekwu na e nwere ọtụtụ ụkpụrụ bụ isi-ịsụgharị gafee ihe ndị ahụ dị egwu nke egwuregwu ahụ. E nwekwara nkwekọrịta doro anya n'etiti arụmọrụ zuru ezu na SEO na profaịlụ backlinks ị nwere na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog. Ka m nye gị ụfọdụ ihe ịma aka iji gosipụta na, yana ọtụtụ ndụmọdụ bara uru nke ga-atụ anya inyere gị aka ịhọrọ usoro ziri ezi maka ha abụọ - nanị n'ihi na ekwenyere m na SEO na backlinks bụ nanị ihe ezi uche dị na ya mgbe e weghatara ọnụ.
Ihe mgbaaka atọ nke njikọ maka SEO - N'anya nke Google
1. Okpokoro Text nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà kachasị ike ị nwere ike iji mee ihe na-eduga na ịsọpụrụ asọmpi ahụ.
2. Nkọrịtakọrịta mmekọrịta abụghị nke ahụ, ma ọ ka bụ ihe nchekwa zuru ezu ma bụrụ nke na-adịte aka mgbe nile nke ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ na-enyocha.
3. Ụdị Nkọwa-Akọrọ ma ọ bụ àgwà dị mkpa maka ụlọ ọrụ bụ ihe bụ isi kachasị nke SEO na backlinks zitere ozugbo site na ndị ọrụ ndụ na zuru ebe niile n'etiti ndị nwere mmasị na ndị niche ahịa ahịa.
Foto zuru ezu banyere SEO na Backlinks - Ọganihu na Aro
Nweta ihe dị iche iche dị oké ọnụ ahịa nke na-enye ezigbo onye ọrụ - ma mee ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog dịka ihe kwesịrị ekwesị bụ naanị backlinks kasị mma na ikike kachasị elu na ọtụtụ PageRank. N'ezie, ọ bụ ọrụ na - ewe oge ma sie ike, ma maka njikọta njikọta ị ga - enwe mgbe ọ bụla ị ga - enye onyinye dị oké ọnụ ahịa na ihe odide gị. E kwuwerị, gịnị mere ndị na-ege gị ntị ga-eji jikọọ na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog? Ọ bụghị ịsị ụlọ ọrụ kachasị mkpa ma ọ bụ ndị na-ahụ maka niche ma ọ bụ ndị na-ede blọgụ kacha elu - ị ghaghị ịnọgide na-enwe mmasị kachasị mma.
Ndị na-ewepụta akwụkwọ iji nweta akwaazụ azụ dị elu na àgwà DoFollow bụ kpọmkwem ụdị njikọ ndị na-arụ ọrụ maka nzube SEO. Kedu ihe ọzọ - ọ nwere ike inye gị mgbasa ozi ka ukwuu na ntanetị n'ịntanetị, nyere gị na ị na-enye ihe dị oké ọnụ ahịa ma ọ bụ post na post nke a ga-agbasa na Social Media - na - emepụta gị ọzọ mbak, ndu, ịkọ, ndebanye, na nke ọma backlinks na a fọrọ nke nta ka onwe-chụpụrụ ụzọ.
A ga-ahaziri backlinks onwe onye maka ma ọ bụ ka mma igodo n'ozuzu saịtị weebụ, ma ọ bụ jikọta ihe ọṅụṅụ (a. k. a. PR na ntụkwasị obi nkesa) naanị. M na-ekwu ebe a na backlinks ndị ahụ na-emepụta ihe na-ekwu na blog, ndepụta ndị ọbịa ma ọ bụ ntinye aha ụdị ihe dị iche iche site na isi engines ọchụchọ, n'ezie mgbe emere na-enweghị nghọta doro anya. Ka anyị chee ya ihu - ụdị njikọ a nwere ike ịbachasị. O di nwute, otutu ndi mmadu ka na-agbali itinye otutu akwukwo ha dika ndi ozo na - eme ya - nani maka ime ka SEO ha. Na eziokwu, Otú ọ dị, njikọ dị otú ahụ dị ala na ihe omume ọ bụla nke ụdị ọdịdị na-emekarị ga-eleba anya ma ọ bụ na-esi n'echiche nke Google, n'ihi nke a na-etinye aka maka oké ntaramahụhụ n'usoro iwu.